Mfe: Mbupu ricnye ọnụahịa, Ndepụta, Label, Mmelite Ọnọdụ, na ego maka Ecommerce | Martech Zone
Enwere otutu ihe dị mgbagwoju anya na ecommerce - site na nhazi ịkwụ ụgwọ, lọjistik, mmezu, site na mbupu na nloghachi - na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elelị ka ha na-azụ ahịa ha n'ịntanetị. Mbupu bụ, ikekwe, otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ịzụta ọ bụla n'ịntanetị - gụnyere ọnụahịa, ụbọchị nnyefe e mere atụmatụ, yana nsochi.
Costsgwọ ndị ọzọ nke mbupu, ụtụ isi, na ụgwọ bụ maka ọkara nke ụgbọ ahịa ịzụ ahịa niile agbahapụ. Nbudata ngwa ngwa bu ihe ruru 18% nke ugbo ala azu ahia.
Ijikọta ihe ngwọta nke mbupu abụghị naanị ịme ka ahụmịhe ndị ahịa ka mma ma nwekwuo ọnụego ntụgharị, ọ nwekwara ike ịchekwa gị ego dịka sistemụ ndị a nwere ike ịnweta ọnụego mbufe ịmaghịrịrị dịrị. Easy bụ otu n'ime usoro ndị ahụ.
Uru Dị Mfe
Mbupu bụ usoro ikpo okwu na mbupu ntanetị nke jikọtara ya na usoro e-commerce ọ bụla na-ewu ewu ma na-arụ ọrụ na ọtụtụ ọrụ ụgbọ mmiri - gụnyere UPS, FedEx, DHL eCommerce, DHL Express, Endicia, USPS Discounted Rate Table, USPS CPP vs CBP, na USPS Igbe Mpaghara mpaghara.
Mepee ọnụego Mbupu Ka Mma - Access Commerce Plus ingnye ọnụahịa-na-ekwe nkwa kasị ala mbupu udu-n'agbanyeghị nke. Na mgbakwunye, nweta ọnụego naanị na ego mkpuchi.
Bipute aha ngwa ngwa - Bipute aha mmado, jikwaa iwu, machiini Mbupu, soro ụgbọ mmiri, ma gwa ndị nnata-niile na otu mfe iji, ígwé ojii dabeere na mbupu usoro.
Ndepụta na nlọghachi - Ndepụta na nloghachi bụ akụkụ dị mkpa nke ahụmịhe ndị ahịa e-commerce. MbupuEasy na-eme ka ha dịrị gị na ndị ahịa gị mfe.
Akpaghị aka Workflows - Ike akpaaka streamlines mbupu, nsuso, na-alaghachi otú i nwere ike gbanwee gị elekwasị anya ihe ndị ka mkpa-dị ka na-ewu azụmahịa gị.
Akụkọ di elu - Nweta nghọta ị chọrọ ịnọ na mbufe nke ndị ahịa gị, ndị ahịa na nsuso, ha niile n'otu ebe.
Akụrụngwa Mgbasa Ozi Easy mfe
Ndị na-ere ọnlaịnụ nwere ike iji usoro na mbupu data zigara ndị ahịa ha nkwukọrịta na-akpaghị aka, gụnyere ozi ịntanetị ndị:
Zụ ahịa andhapụ - weghachite ndị ahịa amaara aha ha hapụrụ ihe ha n’ụgbọ ala ha.
Nweta nyocha ngwaahịa - jikọta ozugbo na ihe dị n'usoro
Ngwaahịa Upsell metụtara - dabere na ihe dị n'usoro
Nye onyinye na Kupọns - dabere na ọnụ ọgụgụ zuru ezu iji ma ọ bụ ihe ndị a zụrụ
Nweta ndị ahịa azụ - dabere na ọnọdụ adịghị arụ ọrụ
Na mgbakwunye, enwere ọba akwụkwọ ndebiri na nkwụnye ndebiri iji mee ntọala ngwa ngwa. Ndị ọrụ ahịa ha na-enyere aka na-enye aka ịtọlite ​​iwu ma kpebie na ndebiri, kwa, maka ndị na-ere ahịa nwere obere ahụmịhe email.
Mbupu emepụtawo njikọta na 3dcart, Amazon Prime Mbupu, Amazon Seller Central, BigCommerce, ChannelAdvisor, eBay, Etsy, Magento, Prestashop, Akwụkwọ ngwa ngwa, Shopify, Echekwa, Volusion, WooCommerce, Yahoo! Slọ ahịa, na ndị ọzọ. Ha nwekwara akwukwo API zuru oke maka ijikọta na ikpo okwu e-commerce.
Mee ka Mbupu gị dị mfe ma chekwaa site na MbupuEasy! Bido oge nnwale ụbọchị 30 ugbu a!
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ maka Mbupu.
Tags: 3dcartagbahapụ ịzụ ahịaAmazon Prime MbupuOnye na-ere ahịa AmazonBigCommerceOnye na -enye ọwaEgwuregwu DHLDHL ExpressebayỌgwụgwụNwachukwuFedExMmekọrịtamagentoakụrụngwa ahịaPrestaShopAkwụkwọ ngwa ngwaAPI mbupu.akpaaka mbupuaha mbubata ahiambupu laghachimbupu nsusombufe ahiaụgbọ mmiriụlọ ahịaUchechukwuegwu mbupueluỌnụ ego USP CBPỌnụ ego USPSUSPS CPP na CBPUSPS Ego Rate IsiokwuUSPS Mpaghara Mpaghara mpagharavollujiwoocommerceYahoo! Slọ ahịa
DepositPhotos: Ọnụahịa Ndị Dị Ezigbo Ego na-enweghị Akaụntụ na Nchọgharị Onyonyo!